सकियो समूह चरणका खेल, कुन महादेशबाट कुन राष्ट्र छनोट भए, कुन बाहिरिए ? – KarnaliPost Daily
सकियो समूह चरणका खेल, कुन महादेशबाट कुन राष्ट्र छनोट भए, कुन बाहिरिए ?
१५ असार २०७५, शुक्रबार ०४:१० June 29, 2018 by Karnali Post Daily
काठमाडौं । रुसमा जारी फिफा विश्वकप २१ औं संस्मरणको प्रतियोगितामा बिहीबार रातिका खेल सकिँदा समूह चरणका बसै खेल सकिएका छन्। सहभागी ३२ राष्ट्रमध्ये १६ राष्ट्र नकआउट चरणमा प्रवेश गरेका छन्। १६ राष्ट्र रुस विश्वकपको यात्रालाई पूर्ण्विराम लगाउँदै घर फर्किने तयारीमा छन् ।
रुस विश्वकपको अन्तिम १६ मा स्थान बनाउन सफल मध्ये १० युरोपेली राष्ट्र रहेका छन् भने ४ दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र रहेका छन्। एसिया र उत्तर अमेरिकाबाट एक(एक राष्ट्रले अन्तिम १६ मा स्थान सुरक्षित गरेका छन्। अफ्रिकन राष्ट्र मध्येबाट भने कुनै टोली पनि नकआउट चरणमा प्रवेश गर्न सकेनन्।
विश्वकपमा २० संस्मरण मध्ये हालसम्म युरोपेली टोलीले ११ र दक्षिण अमेरिकी टोलीले ९ पटक उपाधि जितेका छन् । अन्य महादेशका राष्टले हालसम्म फिफा विश्वकपको उपाधि हात पार्न सकेका छैनन् ।
सहभागी राष्ट्र १४
अन्तिम १६ मा पुग्ने १०
रुस, स्पेन, पोर्चुगल, फ्रान्स, डेनमार्क, क्रोएसिया, स्विट्जरल्याण्ड, स्वीडेन, बेल्जियम, इङ्ल्याण्ड
बाहिरिने स् आइसल्याण्ड, सर्बिया, जर्मनी, पोल्याण्ड
सहभागी राष्ट्र ५
अन्तिम १६ मा पुग्ने ४
उरुग्वे, अर्जे्न्टिना, ब्राजिल, कोलम्बिया
अन्तिम १६ मा पुग्ने १
छनोट राष्ट्र जापान
बाहिरिने स् साउदी अबर, इरान, दक्षिण कोरिया, अष्ट्रेलिया
सहभागी राष्ट्र ३
छनोट राष्ट्र मेक्सिको
बाहिरिने स् पानामा, कोस्टारिका
अन्तिम १६ मा पुग्ने ०
बाहिरिने स् ५
छनोट राष्ट्र छैन
बाहिरिने स् इजिप्ट, मोरोक्को, नाइजेरिया, ट्युनिसिया, सेनेगल
टी–२० विश्वकप आजदेखि, केके छन् नयाँ नियम ? डा.पुर्ण कँडेलः‘जो क्यानडाका घरघरमा जुम्ली‘मार्सी र सिमि’को स्वाद चखाउदैं छन्’ ढाँणथपला युवा क्लब फाईनलमा प्रबेश एन्फा जिल्ला लिग पुनःभोलीबाट सञ्चालन हुने नेपाल र भारत आज भिड्दै, दुबै टोली जितको खोजीमा